Miala any ny Global Voices miteny Italiana ! · Global Voices teny Malagasy
Miala any ny Global Voices miteny Italiana !
Voadika ny 11 Jolay 2008 8:26 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 繁體中文, 简体中文, македонски, Español, English
Maro amin'ireo mpanohana maminay no efa nandre sahady ny vaovao lehibe farany izay vao nivoaka ny andro faharoan'ny Vovonàna Global Voices Fijoroana Vavolombelon'ny tsirairay [Citizen Media, media citoyen] notanterahina tany Bodàpestà, any Hôngria. Naverina navoaka tamin'ny fomba ofisialy koa ireo fiteny telo vaovao ao amin'ny fotodrafitrasa Lingua anivon'ny Global Voices dia ny fiteny Hindi, sy ny Makedoniana, ary ny Albaniana, sady nampidirina koa ny sampany vaovao farany hoan'ireo mpamaky eran-tany dia ny : “Global Voices amin'ny teny Italiana“ !
Nanazava mikasika ny ekipa mpandika amin'ny teny Italiana i Eleonora Pantò izay nisolontena an-dry zareo ary nanao kabary fampidirana nandritra ny dinidinika manodidina ny lohahevitra Lingua sy ny tolotra Aterineto amin'ny fiteny maro samihafa, kabary fohy ihany nohon'ny hateren'ny fotoana. Noho izany dia fifaliana ho ahy ankehitriny ny manolotra anareo ireo mpandridra telon'ny sampana Global Voices miteny Italiana sy mirary azy ireo tongasoa anivontsika.
Bernardo Parrella, izay nitsimohan'ny hevitra voalohany mikasika ny Global Voices miteny Italiana, dia mpanao gazety mahaleo-tena, mpandikateny sy mpivoy monina any Zamerika [USA], mitatitra hoan'ny gazety miteny Italiana (ny ankamaroany) maromaro mikasika ireo lohahevitr'ireo fiaraha-monina avy amin'ny teknolojian'ny solosaina, ary mandray anjara koa amin'ny foto-drafitrasa maro samihafa any amin'izay toerana onenany. anisan'ireo boky maro nadikany ireo izay diam-penin'ny mpanoratra isany Turkle, sy Norman, sy Lessig, sy Stallman, ary Jenkins.
Eleonora Pantò dia miasa toy ny “Knowledge Community Manager” anivon'ny orinasam-pikaroahana antsoina hoe CSP any Torino [Turin], any Italia. Hatramin'ny taona 1992 dia misahana fotodrafitrasa manodidina ny fampianarana sy ny seraseram-solontsaina [ICT, Information and communication technology na TIC, Technologies de l'information et de la communication]. Nanoratra boky vitsivitsy manodidina ny lohahevitry ny vokatry ny seraseram-solontsaina eo anivon'ny fampianarana sy ny toeram-piasana koa izy. Mpivoy fatratra ny tolotra maimaim-poana rafikajy sy fitaovana hoan'ny fampianarana, fatra-panohana ny fotodrafitrasan'ny Global Voices koa izy izay heveriny fa fitaovana hamerina hery vao anivon'ireo haino aman-jery Italiana (izay fatra-piandany loatra matetika).
Lucie Marie Dorion Mengozzi dia mpandikateny mahaleotena teratany Kanadiana izay monina any amin'ny faritry Tôskana [Tuscany, Toscan] izay ampianarany ny taranja teny Anglisy sy Frantsay. Ampilomanosiny tanteraka eo anivon'ny fitaovam-pampianarana eo amin'ny Aterineto raha ireo mpianany, na zatovo izany na olon-dehibe, manomboka amin'ny fijerena lahatsary mivanatana amin'ny Aterineto izany ka hatramin'ny fampiasana serasera adihevitra mivantana “tshaty” [chat] sy ireo blaogy. Mino koa izy amin'ny tombotsoa ateraky ny fampiasana ireo fitaovana atolotry ny Aterineto hoamin'ny fampianarana noho izy ireo izay mamelatra ny sehatra hihazoana fitaovana hafa vaovao maro samihafa, na novokarin'ny avara-pianarana izany na olon-tsotra, anefa dia zara raha trandrahina izany zotra vaovao izay tsy dia mahazatra loatra izany.
Raha nandray anjara tamin'ny fivoriana Berkman@10 tany Harvard, any Zamerika, i Bernardo dia afaka nanazava tamin'ny mpanatrika fivoriana maro ny maha sarobidy ny fanapariahana ny fotodrafitrasa Global Voices izay mampanako ny feo sy vaovao ampitain'ireo olontsotra vavolombelona, eny na dia hatrany Italia aza. Tamin'izany fotoana izany dia 14 ny isan'ireo fandikateny tanivon'ny fotodrafitrasa Lingua-n'ny Global Voices, saingy tsy nisy amin'ny teny Italiana. Nanatsika ahy i Bernardo ary nanoloteny ny ho mpandrindran'izany fotodrafitrasa vaovao (amin'ny teny Italiana izany) raha nahatsikaritra fa hay koa ny namana Lucie (izay efa mandray anjara ao amin'ny Lingua miteny Frantsay) dia teo am-pikarohana mpiara-dia mba hanokafana ny Lingua miteny Italiana.
Efa nanomboka tokony ho iray volana lasa izay nahasarika ny mason'ireo fantsona fampahalalam-baovao maromaro. Ankehitriny dia mahatratra 12 ny mpandikateny eo anivon-dry zareo ary manapariaka lahatsoratra roa isan'andro farafahakeliny.
Ny ekipa Italiana dia manana tanjona goavana dia ny hanorina amin'ny alalan'ny Global Voices hetsika vaovao sady mahery vaika, andraisan'ny fiaraha-monina anjara (mipariaka miaraka amin'ireo zanaka am-pielezana Italiana manerana izao tontolo izao), ary hanatsara ny fiaraha.-iasa izay efa mipetraka miaraka amin'ireo ekip Lingua maro hafa efa mitsangana eo anivon'ny Global Voices.
Andeha hiara mirary Tongasoa ny Global Voices miteny Italiana amin'ny fitenenana hoe ‘Ciao’ [salama] amin'ireo mpamaky Italiana !
Afaka mahafantatra bebe kokoa mikasika ireo fotodrafitrasa 15 izay voizin'ny fandikanteny Lingua ankehitriny ato ianareo. Ary tsarovy fa mbola mikatsaka mpandika teny an-tsitrapo hafa hatrany izahay. Andeha hiara-miasa aminay !